IINGCAMANGO EZINGAMA-71 ZETATTOO ZOSAPHO [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA] - UHLOBO
Umvambo omkhulu yenzelwe ukuhlala ubomi bonke,eyiphiuyacacisaukubaluleka okungapheliyo kunyeukuthandwaI tattoo yosapho Uyilo.
Zininzi iindlela zokukhupha ezi ziqwenga zivuselelekileyo ngokwasemphefumlweniyothando losapho nothando, kodwa ifuthe elichukumisayo lihlala lihleli. Kutheni le nto umvambo wosapho othandekayouphawu lweekhonsepthikuluhlu lwe Iingcamango ezingama-50 + ezilungileyo ze tattoo.
Kuba usapho ngalunye luyinto eyodwa, kufanelekile ukuba kube njalo malunga naloo ntoubugcisa bomzimba womntuifumana imbeko yabo. Nokuba imifanekiso ibonisa amava ekwabelwana ngawo okanye ibhondi enqabileyo, olu hlobo lweubugcisa be tattooihlala ithwalaintsingiselo yokomfuziselo-ukusuka kuyilo lwegama elincinci losapho ukuya kumfazi ongabonakaliyo kunye nentliziyo yomntwana tattoo.
Funda ezi ngcamango zingama-71 zosapho ukuze zikukhuthaze. Unokufumana i-tattoo efanelekileyo ukubonisa usapho lwakho iitattoo umbono.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezi-50 eziphezulu zeTattoo eziPhambili
1. Ubugcisa beTatoo yaseMelika yoSapho
Intsapho ithatha i-tattoo yesiko lika-Sailor uJerry elithandwayo kwangoko kwi-20thkwinkulungwane. Imibala, ngelixa ilula, iyancedisana kakuhle kwaye imigca izotywe kamnandi.
Ukuthabatha okungafaniyo emantla I tattoo yakudala yaseMelika , ekuphela kwendlela yokuyichaza 'yahlukile.' Igama losapho lelona linika i-inki ukubekwa kwayo, njengoko yonke eminye imifanekiso ingahambelani nayo nayiphi na inkcazo eqhelekileyo yosapho kuba yiOctopus ejonge ezantsi ebambe uhlobo oluthile isacholo.
Eli qhekeza libonelela ngophuhliso olutsha lwamaza emixholo yeklasi. Umpu umalunga nokuba isikolo esidala njengokuba beza, kunye nesinye isithethe kumboniso weentyatyambo kunye nesibhengezo. Isicatshulwa siyahlekisa kwaye sitsalwe kakuhle ngokunokwenzeka isiqwenga senaliti esincinci.
Umthombo: @old_store_tattoo_roma nge-Instagram
2. I-Photorealism Uyilo lweMpawu zoSapho
Le tattoo ihambisa iimvakalelo ezifanayo zothando, ukomelela, kunye nemfesane ekubukeni iividiyo zosasazo zasekuhlaleni zabasebenzi ababuyela kwiintsapho zabo emva kokuba engekho emfazweni. Ngokwenyani iphantse ibe sisifinyezo esidluliselwe kulusu, kwaye ngumsebenzi oqaqambileyo ngumzobi we tattoo.
Oku kuhle Umvambo womkhono umbono kwiindawo ezintathu. Ingcezu ephezulu sisipili kwifoto yomntwana wakhe, ngelixa inqaba yesitayile seDisney ifanekisela abantwana kwaye inceda ukubopha itottoo ephezulu kunye notata nomntwana ekudlaleni kumanyathelo ayo ezantsi. Bubugcisa obuhle. Umzobi we tattoo ugxininise ukufiphaza ukunxibelelana ngobunzulu kunye notshintsho kwisiqwenga.
Ukusetyenziswa okumangalisayo kwefilimu ukuhambisa ifoto / ukubalisa amabali kwahlukile. I tattoo uqobo ngumgangatho ophezulu womzobo, kodwa imida yefilimu kwifowuni yasekhaya, okanye kwikhamera yosapho. Yenziwe ngokugqibeleleyo.
Iingcamango ze tattoo kumadoda
3. Izandla kunye neenyawo iiTattoos zoSapho
Oku kufanelekile kwisitayile sangempela se tattoo. Ukufiphaza kuphuculwe kakuhle, kunye nokubala okumnyama okuhamba ngokukhethekileyo ngenkcukacha zezandla, apho ixhasa khona ngokusetyenziswa okumangalisayo komnyama omnyama kwizicwili nakwimingxunya. Ifonti ezotywe ngokufingqayo ishwankathela umyalezo wale mbono we tattoo ngokungangxoli.
Le tattoo encinci yandisa umvambo wesiko we-DOB ngokufaka imifanekiso eyenziwe kakuhle yeenyawo zabantwana phantsi kwe-DOB, kunye nexesha lokuzalwa eliboniswe ngezantsi kwabo.
Omnye umvambo osebenzisa ngobuqili umxholo-ngeli xesha lezandla zomntu ngamnye-ukwenza umbono wosapho. Isandla somntwana sisongwe esandleni soomama, kwaye sidityaniswe ngutata, kwaye sitsale ngeliso elikhulu ngeenkcukacha. Iwotshi epokothwayo enobuchwephesha isetiwe, mhlawumbi, kwixesha lokuzalwa komntwana.
Esi siqwenga siyafana (nomphathi wangaphambili) nangona apha umntwana ubambe umnwe wooyise ngenqanawa enye entle. Igama lomntwana, uValeria, litsaliwe ngesitayile seChicano.
4. Ubugcisa beSilhouette yoQeqesho loMzimba
Wowu. Esi sisiqwenga esintsonkothileyo, esiphinda sisebenzise esimnyama ukubonisa usapho 'kunye' emfanekisweni. Olunye useto-yonke into ukusukela kwewotshi ukuya kwiiflegi zamatye- emva koko lwenziwa kusetyenziswa iinkcukacha ezinzulu, eziqaqambisa ngakumbi izakhono ezisetyenzisiweyo ukuyidibanisa kubugcisa bonke.
Le tattoo yesifuba emnandi iyonwabela uyilo olucacileyo nolucwebezelayo. Umda onamagqabi udala umlinganiso owahlukileyo, ngelixa ngaphakathi kwegqabi umfazi wendoda kunye nabantwana betsalwe ngombala omnyama ukwenza umahluko omkhulu kwiinkcukacha zepaki kunye nomthi emaphethelweni nasezantsi. Njengoko kuhlala kunjalo, itattoo ibhalwe kufutshane nentliziyo yakhe.
Iimpawu ezimnyama nezimhlophe zamadoda
5. Amagama neMihla yoTattoo losapho
Oku kuncinci, tattoo encinci ibonelela ngokuthatha okwahlukileyo kwi-tattoo ye-DOB. Ngunyaka nje, enemihla (engohlulwanga) ngaphantsi kwiphepha leencwadana zamanqaku zidityanisiwe. Nokuba kukho omnye umntwana osendleleni, okanye indoda ilungile ekuqikeleleni iziphumo zokuba ngumzali kwikota encinci eseleyo yenombolo 4.
6. Iskripthi seTattoo yoSapho kunye neeleta
Oku yi Uhlobo lweChicano tattoo kunye nosapho olubhalwe kuyo ngeskripthi esihambahambayo, exhaswa kukufota okulula okumnyama nokungwevu.
Intsingiselo enkulu, enomdla ekuthatheni umsebenzi wefonti yemveli, le tattoo idibanisa izinto zokuhamba kwesizwe kunye negrafiti. Sisiqwengana sobungakanani bengcaciso esidityanisiweyo esidityanisiweyo sisebenza ngomgca ngokukhangela ngomkhondo.
7. Ummeli wezilwanyana Umvambo wosapho
Intsapho yeebhokhwe ezimnyama kwesi siqwenga yinto entle kakhulu yokuguqula imeko yomndeni.
iglasi ibloko yeshawari isiqingatha sodonga
Umthombo: @classic_ink_social_club nge-Instagram
8. Uyilo lweTattoo yesifuba sentsapho
Esi siqwenga sokuqala sinezinto ezintathu ezahlukeneyo zesitayile. Isebenzisa i inkunkuma polka Isitayile sokudibanisa kunye esimnyama, umsebenzi otywebayo obomvu, kunye nembonakalo ye-avant-garde encinci yokwenza isiqwenga sobugcisa. Nangona kunjalo, ii-veers zayo zimka kancinci kuba zibandakanya ukusetyenziswa okupholileyo kwefonti kunye nekhampasi yesitayile esengumfanekiso ophambili kubugcisa.
9. Uyilo lweTattoo yoSapho
Oku kuninzi ukuthatha, njengoko imikhono yesiqingatha idibanisa isitayile esahlukileyo esahlukileyo. Ingelosi sisiqwengana sobugcisa be-neo-classical, ethi isetyenziselwe ukunxibelelanisa ifonti yosapho yegrafiti enkulu ngokubandakanya ubuchwephesha bokunika ipateni kunye nokwenza mnyama.
10. Ukutshatisa iTattoo yoSapho
Umthombo: @colorful_therapy nge-Instragram
Umthombo: @thelexfiles_tattoos nge-Instragram
Umthombo: @tattoorilla nge-Instragram
Umthombo: @caddydaddys_tattoo_piercing nge-Instragram
Umthombo: @colorfaststudios nge-Instragram
Umthombo: @sarayu_su nge-Instragram
Imibuzo ebuzwa ngeTatoo yosapho
Ithetha ntoni itattoo yosapho?
I tattoo yosapho ibonisa ukuzibophelela ngokusisigxina;umntu ngamnyeetch kulusu lwabo ukubalulekayaboAbathandekayo bakwimihla ngemihla kubomi kunye nemfuneko yokubathwalaonxibileyonaphi nabona hamba.
Yintoni tattoo elungileyo yosapho?
Iingcamango zetattoo yosapholontoungasebenzisangokufanelekileyoI-tattoo enkulu, enentsingiselo ibandakanya:
Izilwanyana ezinjenge tattoo yosapho lwendlovu
I-Silhouettes yakho kunye nomntu omthandayo
Umvambo womthi wosapho
I tattoo yentliziyo ebonisa iqela losapho lwakho
Umvambo ofanayo kunye namalungu osapho
Itattoo yosapho enomdla njengezandla zomntwana okanye iinyawo
I tattoo engapheliyo yosapho
Yintoni indalo iphela umvambo uphawu losapho?
Akukho simboli yendalo iphela yosapho, nangona kunjalo zininzi izikhundla kunye nezitayile ze tattoo umntu anokuzibandakanya kubugcisa babo bomzimba ukwazisa abantu abasondeleyo kubo.
izihlangu ezimnyama ezineebhulukhwe ezimnyama
Kweminye, into elula njengamagama abo ubathandayo, kwaye kwimeko yabantwana umhla wokuzalwa kwabo, ithandwa kakhulu. Ukukhula komfanekiso Uhlobo lwe tattoo kuthetha ukuba zininzi iifoto zosapho ezigqithiselwe kwiiTatoo, kwaye iikowuti malunga nosapho zisetyenziswa rhoqo.
Ndiyibeka phi itattoo yosapho lwam?
Ngokwendlela yokuma, amadoda ahlala efaka iitattoo zawo osapho esifubeni ukubonisa indlela ezikufutshane ngayo neentliziyo zabo, ngelixa umphambili wangaphakathi okanye kwenye indawo ngaphakathi kokubona ngokubanzi okanye okunye ukubekwa okusebenzayo.
Sesiphi isilwanyana esibonisa usapho?
Zininziizilwanyanaumntu unakobonisaphakathiusaphoUyilo lwe tattoo ngenxa yamandla ebhondi yabo.
Iingonyama Unobudlelwane obaziwayo bosaphokwayezihlala zibandakanywa kwiitatoos zosapho. Iingcuka nazo zisetyenziswa kakhulu njengoko ziyipakethi yokuhambahamba enobunkokheli obuchazwe ngokucacileyo kunye nocwangco.
AnIndlovuI tattoo yosaphokukwayinto eyaziwayo ngenxa yemvelo ekhuselayo xa umhlambi usongelwa, okanye imifanekiso engaphelelwa lixesha yokuhamba komboko ukuya emsileni kumaqela osapho phesheya kwentlango.
Men bahlala befaka iitattoo zabo zosapho kwisifuba sabo ukubonisa indlela abasondele ngayo entliziyweni yabo, ngelixangaphandleingaloumvambookanye kwenye indawo ngaphakathi komgaqo ngokubanzi wokubonaareokunye ukubekwa okusebenzayo.
Kumfazi, iisihlahla kunyeitottoo yangaphakathiareisikhundla esidumileyosyentsingiselo leyoI tattoo yosapho, ngelixaumlenze ongezantsi / i-ankle kunye neendawo zokubhala i-tattoo nazo zibonisauluvo lweuthando losaphokwaye inokugqunywa okanye iboniswe ngokulula.
Ngaba uzonwabele ezi ngcinga zoyilo zosapho? Ukuba ujonga iiTattoos zosapho ezahlukileyo umbono kunyeinkuthazo,emva koko ucofe kwikhonkco ukuya kuthi ga kwezethuIigalari ezintle zetattoo:
Izimvo zeTattoo ezingama-78 zoMama kunye neNtombi
Iingcamango zeTatoo zeAnchor elula
Uyilo lweTattoo yoyilo
Iimpawu zeTattoo ezingapheliyo
Iingcamango zomama weTattoo kaMama
Iingcamango ezingama-89 zoDade weTattoo
Iingcamango zeTatoo zoTolo
Quote Tattoo Uyilo
imibono yasekhitshini yomgangatho wekhitshi
indlela yokufihla ipompo yephuli
Umzobo welanga nenyanga